Atlético Madrid oo si kulul u weerartay Barcelona, kaddib war rasmi ah ay kasoo saartay arrinta Griezmann – Gool FM
Dajiye July 5, 2019
(Madrid) 05 Luulyo 2019. Atlético Madrid ayaa war rasmi ah ay soo saartay waxay jawaab kaga bixisay hadalo uu sheegay madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ee ku aadanaa inay bilaabeen wada hadalada naadiga Atlético, si ay kaga soo qaataan Antoine Griezmann.
Warkan oo lagu soo daabacay website-ka rasmiga ah ee kooxda Atlético Madrid ayaa lagu sheegay:
“May 14-keedii, Griezmann wuxuu u sheegay Miguel Ángel Gil Marín, Diego Simeone iyo Andrea Berta, inuu go’aansaday in kooxda uu ka dhaqaaqo dhamaadka xili ciyaareedka”.
“Maalmihii xigay Atletico Madrid waxay ogaatay in Barcelona iyo ciyaaryahanka ay gaareen heshiis bishii Maarso ee lasoo dhaafay, gaar ahaan maalmihii xigay kulankii Juventus ee tartanka Champions League, sidoo kale waxay heshiis afka ah wada gaareen bartamaha bishii Febraayo”.
“Iyadoo la tixraacayo hadaladii uu maanta sheegay Josep Maria Bartomeu, waxaan jeclaan laheyn inaan sheegno in kulanka dhex mari lahaa Miguel Ángel Gil Marín iyo madaxa fulinta ee kooxda Barcelona Oscar Grau horey loo qabtay, Marka la eego rabitaanka Barcelona”.
“Dhab ahaantii jawaabteena waxay ahayd mid diidmo ah, waxaana fahanahay in Barcelona iyo ciyaaryahanka aysan ixtiraameynin Atletico Madrid iyo taageerayaasheeda”.
“Natiijada arintan, Atletico Madrid waxay maanta ka codsatay ciyaaryahanka iyo wakiilkiisa, in Griezmann uu helo qandaraaskiisa axada soo socota, si uu ula bilaabo diyaar garowga xilli ciyaareedka cusub saaxiibadiis kale”.
“Atletico Madrid waxay dooneysaa inay muujiso xanaaqeeda, gaar ahaan Barcelona oo waday isku day ay kaga dhaadhiciyaan laacibka in la kansalo heshiiska uu kula joogo kooxda, xili kooxda ay tartan ugu jirtay Champions League, sidoo kale Barcelona ayey kula tartantay horyaalka La Liga, taasoo aan u tixgalineyno xad gudub ku saabsan shuruucda, kalsoonida kooxdeena iyo malaayiin taageerayaasheena ah”.
Xulka Senegal oo u gudbay wareega siddeed dhamaadka koobka qarammada Afrika, kaddib markii ay garaaceen Uganda … + SAWIRRO